ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ
Myanmar IT Resource Forum » DOWNLOADING ZONE » » Softwares » ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ
1 ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 29th April 2011, 11:03 am
Myanmar IT Resource Forum မှ သယ်ယင်းအားလုံး ကောင်းသောနေ့ပါ။
ဟိုစကားပုံကလို အစားကောင်းစားရယင် သယ်ငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေတွေကိုသတိရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ပါပဲ
အခုကျွန်တော်ဝေမျှချင်တာက Viurs သတ်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။ Virus ဆိုယင် ကွန်ပြူတာ သုံးတဲ့ userတိုင်း ထိတွေ့ ဖူးမှာပါ။ virus သတ်တဲ့ နာမည်ကျော်software (kasper,AVG,BitDefender,etc-----) တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပေးချင်တာက ESET NOD 32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ။ သူက kasper တို့လို ကောင်းတဲ့ software တစ်ခုပါ။ space လည်းသိပ်မယူဘူး။ ပေါ့လည်းပေါ့ပါးတယ်။ Daily update လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ software တွေထဲက တစ်ခုပါ။သူက Trail အနေနှင့် ရက်ပေါင်း13330Days (36နှစ်)အမုန်းသုံးလို့ရပါတယ်။အသုံးတည့်လို့ လိုချင်ယင်အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာ သွားဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် install လုပ်ပုံ ကို Read Me လို့ရေးထားတဲ့ notepad file မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။
မှက်ချက်။ ။ Internet Connection ရှိမှ အဆင်ပြေမှာပါ။
ပေးထားတဲ့ လင့်အတိုင်းဒေါင်းလုပ်လို့ လို့ အခုလို စာတွေပေါ်လာယင်
click--- Download anyway. လုပ်ပါ။
Last edited by william016 on 29th April 2011, 3:31 pm; edited 1 time in total
2 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 29th April 2011, 12:00 pm
(၃၆)နှစ်တောင် အလကားသုံးရမှာဆိုတော့ အမုန်းကြီးပါပဲ
3 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 29th April 2011, 2:32 pm
But, I recommend you to check the following link. If it isafreeware, you don't need to check.
4 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 29th April 2011, 3:50 pm
ဒါဆို နောက် post တင်ချင်ယင် (myanmaritresource )ရဲ့ဘယ်မှာသွားရေးပေးရမလဲ။အခုတင်ထားတဲ့ post တွေကိုရွေ့ချင်ယင်ဘယ်လိုရွေ့ ရမလဲ။ သိမ်းချင်ယင်ဘယ်လိုသိမ်းရမလဲ။အကိုလည်းသိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာက (ကျွန်တော်အပါအ၀င်)အတော်များများက copy တွေ၊ Free တွေပဲ သုံးနေကျတာဆိုတော့ဒီလို problem တွေရှိပါတယ်။ ဟီးဟီးပြောရယင်ရှက်စရာ။post တော့တင်နေတယ်ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်းလို့ပါ။ ကျွန်တော်ကို ပြောပြပေးပါအကို။
5 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 29th April 2011, 6:39 pm
အကို share လုပ်ချင်တဲ့ software, ebook, video, အကုန်လုံးကို
အကို့မှာရှိကြောင်း...လိုချင်ရင် မေးလ်ကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ပိုစ့်တင်လို့ရပါတယ် အကို...
download link တော့တင်လို့မရပေမယ့်
ပိုစ့်ရွှေ့ခြင်း ဖျက်သိမ်းခြင်းက moderators, admin တွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်..
အကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာသာတင်လိုက် သူတို့လုပ်လိမ့်မယ် ^_^
6 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ on 30th April 2011, 1:25 pm
william016 wrote: အင်းလေဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။
အင်း...ကျွန်တော်တို့ လဲ ကိုယ့်ဖိုရမ်လေး ဝေေ၀ဆာဆာရှိမယ့် post တွေပဲ။ တင်စေချင်တာပေါ့။ CD ဆိုင်တွေထက်တောင် ပိုစုံတယ်ဆိုတာမျိုးကို လိုချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့်...အဲ့လိုတင်လို့ မရတော့ fox ပြောသလိုပဲ share ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တွေလဲ အဲ့လိုပဲ share နေကြပါတယ်။
7 Re: ရက်ပေါင်း13330 days သုံးလို့ ရတဲ့ ESET NOD32 Smart Security V 3.0.621 လေးပါ